तातोपानीबाट दैनिक एक सय टन चिनियाँ प्याज आयात | Kendrabindu Nepal Online News
1030199 54198 756164 219837
२६ मंसिर २०७६, बिहीबार ०७:१८
सिन्धुपाल्चोक , २०७६ मंसिर २६ ।
नेपाली बजारमा अभाव भएपछि चिनियाँ कृषिजन्य उत्पादन प्याजको आयात ह्वात्तै बढेको छ। उत्तरको मुख्य तातोपानी नाकाबाट तीन सातादेखि दैनिक कम्तिमा सय टनका दरले चिनियाँ प्याज आयात भइरहेको तथ्यांक छ ।
मंसिरको सुरुदेखि नै चिनियाँ प्याजको आयात ह्वात्तै बढेको तातोपानी सुख्खा बन्दरगाह भन्सारले जनाएको छ। बिचौलियाका कारण छिमेकी भारतबाट हुने प्याजको आयात प्रभावित भएपछि नेपाली व्यापारीको आँखा चिनियाँ प्याजमा परेको हो। राजधानी काठमाडौंबाट तीन हजार पाँच सय किलोमिटर टाढा दुरीमा रहेका चीनका विभिन्न सहर पुगेर व्यापारीले प्याज आयात गरिरहेका छन्।
बन्दरगाह भन्सार अधिकृत केशवराज ओलीले नेपाली बजारमा अभाव देखिन थालेदेखि नै चिनियाँ प्याजको आयात बढेको बताए । ‘मंसिर लागेदेखि नै चीनबाट आयात हुने प्याजको आयात परिमाण ह्वात्तै बढेको हो,’ उनले नागरिकसँग भने। नाकाबाट दैनिक औसतमा १० कन्टेनर (एक सय टन) चिनियाँ प्याज राजधानी आयात भइरहेको ओलीले जानकारी दिए। यसअघि गत जेठ १५ गतेबाट नाका सञ्चालनमा आए यता सातामा दुई–चार कन्टेनर मात्र प्याज आयात हुन्थ्यो ।
तीन साताबीचमा नाकाबाट एकै दिन दुई सय ५० टन (२५ कन्टेनर) सम्म चिनियाँ प्याज आयात भएको भन्सारको तथ्यांक छ। नाकाबाट दैनिक भित्रने सामग्रीको दुई तिहाइ हिस्सा चिनियाँ कृषिजन्य उत्पादनले ओगट्दा प्याजले एक तिहाइ स्थान लिइरहेको छ। नाकाबाट यतिबेला दैनिक ३५ कन्टेनरसम्म चिनियाँ सामग्री आयात भइरहेको तथ्यांक छ।
एक सय टन, चिनियाँ, तातोपानी, दैनिक, प्याज आयात
Prevपोखरा प्रिमियर लिगको खेल तालिका सार्वजनिक
सामाजिक सुरक्षामा सहभागी हुन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनNext
‘दैनिक १ लाख सिलिण्डर ग्यास आएको छ’ : आयल निगम
सिन्धुपाल्चोक र म्याग्दीमा तातोपानी स्नान मेला शुरु
मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ५.३ प्रतिशतमा खुम्चने प्रक्षेपण
छक्का पन्जा टिमलाई पल शाहको काउन्टर, गरे ५ लाख सहयोग
स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा संलग्नलाई कारवाही गर्न प्रधानमन्त्रीलाई देउवाको आग्रह
'छक्का पन्जा' टिमद्वारा चलचित्र प्राविधिकलाई १ लाख सहयोग
प्रधानमन्त्री ज्यू ! ‘बोल्ड डिसिजन’ गर्नुहोस्, सरकार र पार्टी बचाउनुस्
जब सङ्क्रमित बोक्न हिडेको एम्बुलेन्सका चालक नै भागे...!
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको हातमा नेपालमा ९० प्रतिशत वित्तीय संस्थाको डाटा, ५० लाख ग्राहकको खर्बाै रकममाथि प्रश्नचिन्ह
लकडाउनमा भोकै परेका जनावरलाई खाना खुवाउँदै अभिनेत्री वर्षा सिवाकोटी
'स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको आर्थिक चलखेलविरुद्ध उजरी दर्ता' : अधिवक्ता त्रिपाठी